Chief Accountant Archives - Page3of3- Glory Assumption Space
Chief Accountant - M/F (1) Post
B.Com,CPA(or)ACCA(or)IFRSဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရပါမည်။MYOBSoftware အားကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။International Accounting Standard ကိုနားလည်ပြီးကောင်းမွန်စွာ အသုံးချနိင်သူဖြစ်ရပါမည်။ Accountant(၅)နှစ်နှင့်Chief Accountant လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၅)နှစ် စုစုပေါင်း(၁၀)နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူဖြစ်ရပါမည်။ အသက်(၃၀)နှစ်မှ (၃၅)နှစ် အတွင်းရှိသူဖြစ်ရမည်။လုပ်ငန်းခွင်မှဖိအားများဧ။် ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိရပါမည်။ လုပ်ငန်းမှချမှတ်ထားသောဘဏ္ဍရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များနှင့် လုပ်ငန်းတွင်း ကြီးကြပ်မှု့စနစ်အား မသွေမတိမ် လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင် သူဖြစ်ရပါမည်။ မိမိဧ။် စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်တင်မူတည်၍ လစာညှိုနှိုင်းပေး ပါမည်။
Chief Account - Female ( 10 post )
Age over 30 years Above 3years experience in related field Any Graduate Can use well Peach Tree Software and Excel [caption id="attachment_711" align="alignnone" width="547"] A beautiful businesswoman looking at camera with working men on background[/caption]
<<<<<<<<<<<<<<< “ URGENT POSITION ”>>>>>>>>>>>>>>>>> Yangon မြို့ ရှိ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ရှိသော GAS Agent နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကုမ္မဏီ ကြီးများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဝန်ထမ်းများ အမြန် အလိုရှိနေပါသည်။ 1.	Chief Accountant / Female (5) Posts / Salary – Negotiable -	Any Graduate. -	CPA. -	LCCI Level III & MYOB Software. -	(5) Years Experience in related field. Email ဖြင့်၎င်း၊ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com , gasrecruit.hr1@gmail.com Phone No.- 09 262223783, 09 970539386,09 262555438, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။